[ထပ်ဆင့်သင်ခန်းစာ 2] PATH ဆိုတာဘာလည်း? - Acroquest Myanmar Technology
[ထပ်ဆင့်သင်ခန်းစာ 2] PATH ဆိုတာဘာလည်း?
ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ “Lecture 0: Let’s install Java.” မှာ configure လုပ်ခဲ့တဲ့ environment variable “PATH” ဆိုတာဘာများပါလိမ့်။
အဓိကအနေနဲ့ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က environment variable PATH ကိုတပ်ဆင်မထား(setမလုပ်ထား)ရင်တောင်မှ သင်input ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ Java compiler (javac) ကအောက်မှာပြထားသလို run ပေးနိုင်ပါတယ်။
※ဒီနေရာမှာသင်ဟာမတူညီတဲ့ version ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ “jdk1.7.0_15” ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ “1.7.0_15” ဆိုတာဟာ version number ဖြစ်လို့ပါပဲ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ “C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin” ဆိုတဲ့ command ကို command prompt ဖွင့်တဲ့အချိန်တိုင်းရိုက်ထည့်ပေးနေရတာတော့အနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က environment variable ဖြစ်တဲ့ “PATH” ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
“C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin” ဆိုတဲ့ command ကို PATH ဆိုတဲ့ environment variable မှာထည့်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူက “C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin” ဆိုတဲ့ command ကို command prompt မှာအချိန်တိုင်းလိုက်ထည့်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။
● Environment variable “PATH” ဟာ program file ရဲ့ရှာချင်တဲ့ object ကိုရှာပေးဖို့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
အဓိကအနေနဲ့ “javac” command ဟာ “C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_javac.exe” ဆိုတဲ့ command ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
နောက်တမျိုးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုသူက “javac” command ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ “C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_javac.exe”. နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ “javac” လေးဟာ “javac.exe” ဆိုတဲ့ program file လေးကိုသွားပြီးexecuteလုပ်ပေးပါတယ်။
သင်ဟာ “javac” ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့် “C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_javac.exe” file က launch လုပ်ရတာပါလည်း။
သင်တို့ထဲကတချို့ကတော့ “PATH” ဆိုတဲ့ environment variable ဟာအရေးပါတဲ့နေရာကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိကျမှာပါ။
Environment variable “PATH” ဆိုတာကတော့ “program တွေအတွက်လိုချင်တဲ့targetကိုရှာပေးတယ်”လို့ဆိုလိုပါတယ်။
“PATH” ဟာ command prompt ကနေထည့်လိုက်တဲ့ command နဲ့တူညီတဲ့ program file ကိုရှာဖွေပြီး execute လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး system က Command Prompt မှရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ input ကလက်ရှိ directory ထဲမှာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါတယ်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ system ဟာ PATH environment variable ကညွန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာ program file ရှိမရှိကိုရှာပါတယ်။တကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်အဲဒီ program file ကို executed လုပ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် PATH ဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းကဒီလိုရှိတာလည်း။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ပျူ တာတစ်လုံးမှာ program file တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာပြန့်ကျဲပြီးရှိနေပါတယ်။
အသုံးပြုသူဟာ input command တွေကိုရိုက်ထည့်တဲ့အချိန်တိုင်းကွန်ပျူ တာထဲမှာရှိတဲ့program files တွေအကုန်လုံးကိုရှာဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ သင်ဟာမြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ CPU သုံးထားတာတောင်မှ processing လုပ်တဲ့နှုန်းဟာနှေးလာပါတယ်။
ဒါကြောင့်အချိန်မလွန်ခင်မှာ command file တွေကိုထားမဲ့နေရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တည်ဆောက်ပုံရှိပြီးတော့အဲဒီနေရာကိုလည်း “PATH” ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
PATH environment variable ဟာ semicolon(;) ကိုအသုံးပြု ပြီး command path ကိုရှာဖွေဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ PATH က “C: \_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_;C: \_Windows\_System32\_” ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူ တာဟာ input command ဖြစ်တဲ့ “C: \_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_” နှင့် “C: \_Windows\_System32\_” အောက်မှာရှိတဲ့ program files တွေကိုသွားရှာပါတယ်။
※မှီငြမ်းချက်: အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ environment variable ရှိတဲ့ screen ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလည်းဆိုတာကို “Lecture 0: Let’s install Java” ကိုမှီငြမ်းပါ။
ဒါနဲ့ Windows ဟာ special extension တွေဖြစ်တဲ့ exe, com, bat အစရှိတဲ့ program file တွေကိုလက်ခံပါတယ်။
● “environment variable?” ဆိုတာဘာလည်း။
အခုဖော်ပြနေတဲ့ဆောင်းပါးမှာ “environment variable” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခဏသုံးပါတယ်။ဒါနဲ့“environment variable” ဆိုတာဘာလည်းဆိုတာဘာလည်းသင်သိပါသလား။
Environment variable ကို OS တိုင်း(သို့)login user တစ်ဦးချင်းစီမှာတပ်ဆင်ထားပြီးအဲဒါဟာကွန်ပျူတာထဲမှာ refer, set နဲ့ working application တွေကို share ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
Environment variable မှာ variable name နဲ့value အစုံကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ “PATH” ကသာ environment variable တစ်ခုဆိုရင် “PATH” ဆိုတာက variable name ဖြစ်ပြီး “C: \_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_15\_bin\_;C: \_Windows\_System32\_” က value ဖြစ်ပါတယ်။
Environment variable မှာ PATH အပြင်တခြားအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။
နောက်ထက်အရေးကြီးတဲ့ environment variable ကတော့ “CLASSPATH” ဖြစ်ပြီးသူက JAVA မှာသုံးပြီး သူက JAVA class တွေရဲ့ target directory တွေကိုရှာဖွေဖို့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
ပြီးတော့ Windows environment မှာ environment variables အမျိုးအစားအများကြီးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ UNIX မှာတော့ environment variable ကိုသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် “TZ” ကို time zone(Greenwich Mean Time ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်) အတွက်သတ်မှတ်ထားပြီး “MANPATH” ကတော့ UNIX command ရဲ့ manuals ကိုပြသတဲ့လမ်းကျောင်ကိုဖော်ပြပါတယ်။
Command Prompt ရဲ့ prompt indication ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ environment variables “PROMPT” ဟာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Windows environment တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
～ အနှစ်ချုပ် ～
1. Environment variable “PATH” ဆိုတာ program files တွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။
2. Environment variable ဆိုတာ OS နဲ့ login user တွေမှာ ဘုံတန်ဖိုးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ value တစ်ခုဖြစ်တယ်။